Waa maxay xiddiggu: sifooyinka, noocyada iyo muhiimadda | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 10/06/2022 10:00 | Astronomy
Marka aan ka hadalno cilmiga xiddigiska iyo hawada sare, fikradda xiddigiska ayaa had iyo jeer la adeegsadaa. Si kastaba ha ahaatee, dad badani ma yaqaaniin waxa xiddiggu yahay. Guud ahaan galaxies-yada waxa jira walxo badan oo samada ah oo leh astaamo kala duwan oo ka mid ah koonkeena. Waxaa xiiso leh in la ogaado waa maxay xiddig iyo intee in le'eg ayay muhiim u tahay?
Sababtaas awgeed, waxaan maqaalkan u hurayna in aan idiinka warramo waxa uu xiddigu yahay, waxa uu yahay iyo muhiimadda uu leeyahay.
1 waa maxay xiddig
2 xiddigaha nidaamka qoraxda
7 Xididdada jirka
Marka laga eego dhinaca xiddigiska, qaybaha kala duwan ee jireed ee ka jira koonka waxa loogu yeeraa xiddigaha, ama si rasmi ah, jirrada samada. Si adag haddii loo hadlo, xiddiguhu waa hal unug, kaasoo jiritaankiisa lagu qiimeeyey ama lagu xaqiijiyey hababka cilmiyeysan ee indha-indheynta hawada, sidaa darteed waxay ka kooban yihiin qayb ka mid ah jidhadhka samada oo ay ka dhex jiri karaan jihooyin badan oo samada ah, sida. giraanta meeraha ama xiddigaha, suunka asteroid, oo ka kooban waxyaabo badan oo kala duwan.
Waxyaabaha meereheena ku jira ee ka jira hawada sare waxay soo jiiteen bini'aadamka ilaa iyo waayihii hore, waxaana lagu sii waday in lagu ogaado oo la fahmo iyada oo loo marayo telescopes, baaritaanka hawada, iyo xitaa safarrada dadka ee dayaxa. Dadaalkaas mahadii waxaynu wax badan ka baran karnaa adduunyada kale ee jira, galaxyada martigeliya iyaga iyo koonka aan dhammaadka lahayn ee ka kooban wax walba.
Si kastaba ha ahaatee, xitaa iyadoo la kaashanayo telescopes caadiga ah. dhammaan xiddigaha jira laguma arki karo isha qaawan. Kuwo kale xitaa waxay u baahan yihiin qalab saynis oo gaar ah, ama jiritaankooda kaliya waxaa laga qiyaasi karaa saamaynta jireed ee ay ku leeyihiin jirka kale ee ku hareeraysan.
xiddigaha nidaamka qoraxda
Nidaamka qorraxdu, sida aan u naqaanno, waa magaca deriska qorraxdeena ee ku xeeran meerayaasha iyo curiyeyaasha kale waxay sameeyaan deegaan si toos ah hawada sare ee wareega. Waxay ka bilaabataa badhtamaha qorraxda lafteeda ilaa cidhifka sare ee daruur walxo dahsoon. loo yaqaan Oort Cloud iyo Kuiper Belt. Dhererka nidaamka qoraxda ilaa meeraheedii u dambeeyay (Neptune) waxa uu ka badan yahay 4.500 bilyan kilomitir, taas oo la mid ah 30,10 unugyo xiddigiye (AU).
Waxa jira dhawr nooc oo xiddigo ah oo ku jira nidaamka qorraxda, sida:
1 xiddig qorraxda
8 meere. Meerkuri, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune.
5 meere dwarf. Pluto, Ceres, Eris, Makemake, iyo Haumea.
400 oo dayax-gacmeed oo dabiici ah.
Xiddiguhu waa kubbado kulul oo gaas iyo balaasma ah oo lagu hayo qaraxyo aan kala go' lahayn oo ay ka dhashaan isku-dhafka atamka sababtoo ah jiidantooda. Qaraxa ayaa soo saaray xaddi aad u badan oo iftiin ah, shucaaca elektromagnetic, iyo xataa walxo, sida Haydarojiin iyo atamka helium ee ay ku jireen ayaa loo beddelay walxo ka culus, sida kuwa ka kooban meeraheena.
Xiddiguhu waxay noqon karaan noocyo kala duwan, iyadoo ku xidhan cabbirkooda, nuxurka atomiga, iyo midabka iftiinka iftiimaya. Meeraha ugu dhow meereheena waa qorraxda, inkastoo habeenkii tiro badan oo xiddigo ah lagu arki karo meelaha fog ee cirka. Waxa lagu qiyaasaa in ay jiraan ku dhawaad ​​250.000.000 oo xiddigood oo ku jira galaxyadayada.
Meereyaashu waa walxo wareegsan oo cabbirro kala duwan leh, oo ka samaysan isla walxo gaas ah oo soo baxay xiddigaha, laakiin aan dhammaadka lahayn oo qabow badan, sidaas darteedna waxay leeyihiin astaamo jidheed iyo kiimiko oo kala duwan. Waxaa jira meere gaas ah (sida Jupiter), meerayaasha dhagaxyada leh (sida Mercury), meerayaasha barafka ah (sida Neptune), waxaana jira dhul. meeraha kaliya ee aynu ognahay ee leh xaddi badan oo biyo dareere ah, sidaas darteed meeraha kaliya ee nolosha leh.
Marka loo eego cabbirkooda, waxa kale oo la odhan karaa waa meerayaasha dwarf: qaar aad bay u yaryar yihiin oo la barbar dhigi kara meerayaasha caadiga ah, laakiin aad bay u weyn yihiin in loo tixgeliyo asteroids, sidoo kale waxay u jiraan si madaxbannaan, taas oo ah, haddii ay yihiin dayax iyo haddii kale. qof kasta
Meereyaasha wareega, waa suurtogal in la helo xiddigo la mid ah, laakiin miisaan aad u yar, kuwaas oo culeys ahaan lagu hayo meelo badan ama ka yar oo wareeg ah, oo aan ku dhicin iyaga ama gebi ahaanba dib u guran.
Taasi waa xaaladda dayaxa kaliya ee meereheena: dayaxa iyo xiddigaha tirada badan ee meerayaasha kale ee muhiimka ah, sida. Dayax gacmeedyada Jupiter, ayaa maanta lagu qiyaasaa ku dhawaad ​​79. Waxa dhici karta in dayaxani ay la mid yihiin asalkooda. Meereyaasha xidhiidhsan, ama laga yaabo inay ka yimaaddaan ilo kale, waxa si fudud u jiidaya cufisjiidka, iyaga oo ku ilaalinaya wareega.
Comets waxaa loo yaqaanaa walxaha dhaqaaqa ee nooc kasta leh, waxayna ka kooban yihiin baraf, boodh iyo dhagaxyo meelo kala duwan laga keenay. Jidhadhkan samadu waxay ku wareegaan Qorraxda iyagoo ku wareegaya elliptical, parabolic ama hyperbolic orbits waana la aqoonsan karaa sababtoo ah markay u soo dhowaadaan xiddiga, kulaylka ayaa dhalaaliya barafkooda waxayna siinayaan "dabo" gaas ah oo gaar ah. Comets waxa la og yahay inay qayb ka yihiin hab-dhiska cadceedda oo leh habab la saadaalin karo, sida majaajiliistaha caanka ah ee Halley, oo nagu dhacda 76-kii sanaba mar.
asalka dhabta ah ee majaajilada lama garanayo, laakiin wax kastaa waxay muujinayaan inay ka iman karaan kooxaha Neptuniyaanka ah sida Oort Cloud ama Kuiper Belt oo ku yaal cidhifka nidaamka qoraxda, qiyaastii 100.000 AU ka soo Qorraxda.
Asteroids waa shay dhagax leh oo leh halabuuro kala duwan (badanaa macdan ama walxo macdan ah) iyo qaabab aan joogto ahayn, oo aad uga yar meerayaasha ama dayaxa.
Jawi la'aan, inta badan nolosha nidaamka qorraxdeena waxay samaysaa suunka u dhexeeya Mars iyo Jupiter kaas oo ka sooca meerayaasha gudaha iyo meerayaasha dibadda. Kuwo kale, beddelkeeda, Waxay dhex wareegaan hawada sare, iyagoo dhex maraya meeraha meeraha ama waxay noqonayaan satalayt xiddigo waaweyn.
Kani waa magaca loo bixiyay shayada ugu yar ee habka qoraxdayada, in ka yar 50 mitir dhexroor laakiin ka weyn 100 micrometer (oo sidaas awgeed ka weyn boodhka koofiyadaha).
Waxa laga yaabaa in ay yihiin qaybo ka mid ah majaajilada iyo asteroids kuwaas oo lulmay, oo ay u badan tahay in cufis-jiidka meeraha uu soo jiitay, una rogay jawigooda oo isu beddelay meteorites. Marka tan dambe dhacdo, kulaylka is-jiidhka hawada jawiga ayaa kulayliya oo uumi gebi ahaan ama qayb ahaan. Xaaladaha qaarkood, jajabyada meteor ayaa ku dhuftey oogada Dhulka.
Nebulae waa ururin gaas ah, oo u badan hydrogen iyo helium, oo ay la socdaan boodhka koofiyadaha iyo walxo kale, oo ku kala firidhsan meel bannaan, in ka badan ama ka yar ayaa lagu hayaa goobta. Mararka qaarkood kan dambe ayaa ku filan inuu bilaabo isku-buufin dhammaan walxahan xiddigaha, abuurista xiddigo cusub.
Kooxahan gaaska ah, waxay noqon karaan wax soo saarka burburinta xiddigaha, sida supernovae, ama ururinta walxaha ka haray habka abuurista xiddigaha da'da yar. Nebulaka ugu dhow Dhulka waa Helix Nebula, 650-sano-iftiinna u jira Qorraxda.
Kooxaha Xiddigaha, mid kastaa waxay u badan tahay in uu leeyahay nidaam qorraxeed u gaar ah, oo ay la socdaan nebulae, boodhka cosmic, comets, suumanka asteroid, iyo walxaha kale ee samada; waxay sameeyaan unugyo waaweyn oo loo yaqaan galaxies.
Iyadoo ku xiran tirada xiddigaha ee ka kooban galaxyada, waxaan ka hadli karnaa galaxies dwarf (107 stars) ama galaxies giant (1014 stars); laakiin waxaan sidoo kale u kala saari karnaa kuwo wareeg ah, elliptical, lenticular iyo kuwo aan joogto ahayn.
Galaxyada uu ku dhex jiro nidaamka qorraxdu waa Jidka Milky, oo loogu magac daray caanaha hooyada ee Hera, oo ah ilaahii pantheon ee ilbaxnimadii Giriigii hore.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto waxa uu xiddiggu yahay, sifooyinka iyo muhiimada uu leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » waa maxay xiddig
Sida loo doorto muraayadaha indhaha